Wondershare Ọkà Mmụta Mmemme
Ebube Software, ebube Life
Wondershare Ọkà Mmụta Mmemme N'ihi The 2013 ~ 2014 School Year
Taa na aku na uba, ọ bụ mgbe a ịma aka maka ụmụ akwụkwọ iji kwụọ ụgwọ maka mahadum. Nke a nwere mmetụta nke na-edebe ụfọdụ n'ime anyị na-egbuke egbuke uche si na a mahadum, na-agọnahụ global arụ ọrụ ego ruru eru technology na-agba mbọ na-arụ ọrụ. Wondershare Steepụ aka mbuso nsogbu site n'inye technology na ego ha iji ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi.
Ulo oru na March 2013, Wondershare ume oruru ụmụ akwụkwọ na-edo a 500-okwu edemede na isiokwu nke "Olee otú Technology enriches Ndụ Anyị" n'ihi na ohere iji merie otu n'ime mmadụ abụọ $1.000.00 ego scholarships. Site na mgbe usoro ihe omume e mechiri, Wondershare natara ọtụtụ narị nnyefe, na mara ọkwa mmeri na June 19. The ego scholarships ike ga-eji kwupụta nkuzi, ụlọ, akwụkwọ, na ndị ọzọ na mahadum mmefu.
Mfọn Mmeri Mmụta si Okwu Mmalite
Okwukwe Lemire-Baeten bụ onye gụsịrị akwụkwọ na klas Valedictorian, ugbu a ịga Harvey Mudd College dị ka ihe injinịa-amụrụ ihe.
Stefani Pyorre a ugbu a na-amụ na kọmputa injinịa na Mahadum nke California Santa Barbara.
Nkasi obi na Nchedo
Okwu ahụ bụ "ịnọ" adịghị ọbụna ịmalite na-akọwa otú dị mkpa nkà na ụzụ bụ ọha mmadụ taa. Dị ka onyeisi oche nke abụọ ọrụ òtù, onye nduzi iri atọ ụmụ akwụkwọ, a lifeguard, na a ga-eme n'ọdịnihu Biomedical engineer, enweghị m ike iche echiche banyere ụwa na-enweghị technology. Ọtụtụ mgbe, anyị na-ndị a ọganihu nke akwadoro: anyị na-atụ anya a n'ụwa ebe anyị nwere ike izipu ozi ederede, na-ekwurịta okwu site na internet, na-eji ihe AED, na-enweta robot-aka n'ịwa ahụ. N'ihi na ndị ọgbọ m, bụ onye tolitere na kọmputa, ekwe ntị, na web ohere, ndị a ọganihu aga site ama, nanị otu akụkụ nke ndụ anyị. Ụfọdụ n'ime ndị a ọganihu nanị ka ndụ anyị mfe na ndị ọzọ ala; ndị ọzọ ịzọpụta anyị ma chebe anyị pụọ n'ihe ize ndụ kwa ụbọchị na anyị ndụ.
Dị ka onyeisi oche nke m ụlọ akwụkwọ National Honor Society na California Ọkà Mmụta Federation maka afọ abụọ gara aga, m na-enwe ekele maka ederede ozi, emailing, na-elekọta mmadụ media netwọk. The afọ iri na ụma na m klọb na-ekwurịta okwu kasị mma digitally, dị ka ihe niile n'ime ndị ọgbọ m. Iji akpọọ nzukọ mberede, m naanị nwere biputere ihe anyị na Facebook otu ma ọ bụ zipu a ederede ka ndị ọrụ nche. Apụghị m aghọtazu-akpọ nke iri atọ na ụfọdụ òtù ọ bụla ahụ ke 24 awa na-enweghị enyemaka nke ndị internet ma ọ bụ ekwe ntị. Mmụta ida ome akwụkwọ, ma Facebook enye ihe ọmụma nile mgbe posted na anyị na peeji. Dị ka onye nduzi nke 30+ ụmụ akwụkwọ na afọ anọ, Achọpụtara m na email dị oké mkpa iji na-agba ọsọ m mgbe ụfọdụ keogbaaghara na-ụlọ azụmahịa. On a ukwuu, mba azụmahịa dị ka anyị maara na ọ ga-ekwe omume na-enweghị a nke oge a teknụzụ. Nkwurịta okwu bụ mkpa maka n'ụwa nile mmekota, na nkà na ụzụ nke taa na-enye na.
Ma, ọ bụ na nkà na ụzụ na anyị adịghị ahụ kwa ụbọchị na nke ahụ bụ ihe kasị oké mkpa iji anyị na otu. Otu ihe atụ bụ akpaghị aka mpụga defibrillator. Dị ka a lifeguard, m na e nyere ọzụzụ iji ihe AED ịzọpụta ndụ ndị mmadụ. Nke a technology, nke ntukwasi 28 pound na 1980, ugbu a dị na a ise-paụnd ụdị na ike ga-ebuga mfe ma na-enye na-azọpụta ndụ eletriki pulses na oria n'ebe ọ bụla. Dị ka a ga-eme n'ọdịnihu Biomedical engineer, m na mere nnyocha dị ukwuu na ahụ ike na ubi, na m na ume site na ọganihu m na-ahụ. Prosthetics bụ nchebe, ọgwụ na-ọzọ mfe ndinọ, na robot-aka ịwa ahụ ugbu a-agbanwe n'ụlọ ọgwụ. M na-atụ anya na otu ụbọchị gụkwuo ndị a ọganihu na-eme ka ndụ bụghị nanị aba-bi, ma mma-bi.
Niile ọganihu anyị gburugburu taa adịghị mfe ọgaranya ndụ anyị, ma mee ka ha ala, mfe, nchebe, na, nanị tinye, livable. Ederede ozi na Facebook-eme ka nkwurịta okwu ngwa ngwa na ndị ọzọ dị irè, nke bụ ihe anyị na-achọ kwa ụbọchị na-enye anyị ohere-enwe oge anyị kama na ndị enyi na ezinụlọ. Ma, ọ bụ na nkà na ụzụ na anyị adịghị ahụ kwa ụbọchị na enriches anyị kasị, site guzo na njikere ịzọpụta ndụ anyị na-eme ka anyị nchebe na ahụ ike. Niile nke ndị a ọganihu-eje ozi na-eme ka ndụ anyị, na otu ụbọchị dị ka a Biomedical engineer, m ga-a ike na-eme ka ha ka mma ọbụna karịa tupu.
Mmetụta nke Technology on Ndụ Anyị
Technology bụ ihe ogologo reveled site ọha mmadụ. Gwurie egwu, ndị mmadụ tumadi ịhụ technology dị ka otu ụdị nke nkwurịta okwu ọ bụ ezie na ọ bụ ugbu a na ọ fọrọ nke nta akụkụ nile nke ndụ ha. Ekwentị mkpanaaka, kọmputa, music ngwaọrụ, ụgbọala, na Laptọọpụ bụ ihe niile ndị yiri ịna-echegbu n'elu kasị; ma ọ ọhụrụ iPhone ma ọ bụ ọhụrụ MacBook Pro. Mgbe ndị mmadụ na-ele anya na-ekwu ọhụrụ iPhone, ha tumadi ịhụ a nnọọ tipia-enwe ike iko ihuenyo gbara gburugburu a bụrụ na nke plastic. Mgbe ụfọdụ, ha pụrụ ọbụna mgbe ụfọdụ a ilekiri na batrị n'ime. Ụfọdụ pụrụ ọbụna na-eche na batrị bụ ihe niile n'ebe bụ na ekwentị, olee otú ha maara nke niile nke zoro ezo technology karịrị nke ahụ? Nke a na-eme ka technology mkpa na-akpali. Technology na-ekele ndị nile na-efe ya ma na-akpali akpali ndị niile na-eche.
Gịnị na-eme technology nke bara oké uru bụ ya si mfe. Mgbe injinia nwere ike na-arụ ụka, ihe 80- afọ na iji ha na laptọọpụ na-arịọ ya dị iche. Site ọganihu na nkà na ụzụ, engineer na-enwe ike ịmepụta otu ngwá mgbagwoju n'onwe ya na ọ nwere ike na-ghọtara na a kwesịrị ekwesị akwụkwọ, ma nwere ike ime ka ndị dị otú ahụ ihe ngwá inweta ọha na eze. Site ịrụsi ọrụ ike ha, ndị mmadụ na-enwe ike video chat na ndị ikwu na mba ndị ọzọ, ma ọ bụ mee ha n'isi ụtụtụ a obere mfe site n'inwe ike ime ka ha kọfị na a aka nke a bọtịnụ. Enweghị technology ndị ka ga-ilekọta na buru kọfị site aka ọnwa tupu ha ga-ọbụna inwe a uto nke ya si richness. Technology bụ nnoo akụkụ nke ndụ kwa ụbọchị na ọtụtụ mbụ ụwa mba.
Aga n'elu na karịrị, nkà na ụzụ na-enriches ndụ site na-azọpụta ha. Nke a bụ nnọọ ìhè ná ụgbọala dị ka ọdịdị nke ọhụrụ nchekwa atụmatụ bụ mgbe nile. Obere ụgbọala ugbu a na-abịa na akpaka airbags, mgbochi mkpọchi agbasa usoro, n'ihu-ele ese foto, ma n'azụ-view ese foto na iji hụ na nchekwa nke ọkwọ ụgbọala na pedestrians. Ọ bụrụ na ihe mberede na-eme, mmadụ nwere ike iji ihe ọ bụla ekwentị na-eme ka ihe mberede ekwentị oku na mbụ responders nwere ike iji defibrillator aka ịtụte merụrụ ahụ. Dọkịta nwere ike na-enyocha ndị merụrụ ahụ na x-ụzarị ma na-emeso ndị ọrịa na ndị ọzọ nile ụdị technology. Prescriptions nwere ike gbara akwụkwọ na-akpaghị aka gafee na-ekwu na jupụtara n'ụzọ dị mfe site na kọmputa na internet. Ọrịa nwere ike ịlele ọnọdụ nke ha ọgwụ n'elu ha igwe na nanị ụgbọala ha na obodo ahịa ọgwụ na-eburu ya elu. Azụmahịa bụ mgbe ahụ mere ihe karịrị otu ndekọ ego. Technology bụghị nanị udiozi a ndụ nchekwa, ma ọ bụ a na mma na kama mkpa ka ọtụtụ usoro nke azụmahịa.
Enweghị technology ọha ga-abụ otu ihe ahụ, mmekọrịta ga-agwụ, ulo oru ga-akwụsị ịdị adị, ụlọ ọgwụ ga ịbụ nanị a mbikọ na herbs. Enriching akụkụ nile nke ọha mmadụ, ọ ga-abụ nanị agaghị ekwe omume ikwu na nkà na ụzụ bụ bụghị a mkpa.
Lelee ihe nnukwu oge geek celebrity, tech nta akụkọ na kwa president nke Lockergnome Chris Prillo nwere ikwu banyere Wondershare si Ọkà Mmụta Mmemme.
Wondershare ™ Ọrịa Aids College ibikwa High School Seniors na New Ọkà Mmụta Mmemme; Kọwakwuru Popular Software onyinye Mmemme
Wondershare ™ ọkwa na mmeri maka Ọkà Mmụta Mmemme aiding College-agbụ High School Gụsịrị Akwụkwọ na